China Na-ekwu okwu banyere atụmanya mmepe nke akpa akpa na ndị na - emepụta na ndị na - eweta ya | Jintang
Abstract: Ekwenyere m na onye ọ bụla kwesịrị ịma nke ọma na akpa, nke bụ nnukwu akpa eji ebu ma chekwaa ihe. Taa, onye nchịkọta akụkọ nke boda plastic ga-ewebata gị aha nke ihe a nke bụ naanị otu okwu site na akpa ahụ, nke a na-akpọ FIBC.
mba m plastic kpara akpa akpa bụ tumadi exported na Japan na South Korea, ma na-ike na-emepe emepe ahịa na Middle East, Africa, na United States na Europe. N'ihi mmepụta mmanụ na ciment, Middle East nwere nnukwu ọchịchọ maka ngwaahịa FIBC; n'Africa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmanụ ala ha niile na-emepụta ngwaahịa ndị a kpara akpa plastik, enwekwara nnukwu ihe maka FIBC. Afrika nwere ike nabata ogo na klas nke FIBC nke China, ya mere enweghi nsogbu isi imeghe ahia n'Africa. United States na Europe nwere ihe dị elu maka ogo FIBC, na FIBC ndị China enweghị ike iru ihe ha chọrọ.
Ogo FIBC dị ezigbo mkpa. Enwere ụkpụrụ siri ike maka ngwaahịa FIBC n'ahịa mba ofesi, ihe elebara anya n'ụkpụrụ ahụ dịkwa iche. Japan na-a attentiona ntị na nkọwa, Australia na-elebara anya na ụdị, na ụkpụrụ European Community na-a attentiona ntị na arụmọrụ ngwaahịa na njirimara teknụzụ, nke dị nkenke. United States na Europe nwere nlezianya chọrọ na mgbochi ultraviolet, mgbochi ịka nká, ihe nchekwa na akụkụ ndị ọzọ nke FIBC.
"Ihe nchebe" bụ ihe ruru n'etiti ikike kachasị nke ngwaahịa na ibu ihe eji emepụta. Ọ kachasị na-adabere na enwere nsogbu ọ bụla na ọdịnaya na akpa ahụ, yana ma nkwonkwo ahụ mebiri emebi ma ọ bụ na ọ bụghị. Na ụkpụrụ ndị yiri ya n'ụlọ na mba ofesi, a na-edozi ihe nchekwa na 5-6 ugboro. Enwere ike iji ngwaahịa FIBC nwere okpukpu ise nchekwa ihe nchekwa maka ogologo oge. Ọ bụ eziokwu a na-agbagha agbagha na ọ bụrụ na agbakwunye ndị inyeaka na-egbochi ultraviolet, ngwa ngwa nke FIBC ga-abawanye ma zọọ mpi.
FIBC kachasị nwere nnukwu, granular ma ọ bụ ihe ndị nwere ntụ, yana njupụta anụ ahụ na ịtọpụ ọdịnaya nwere mmetụta dị iche iche na nsonaazụ ya niile. Banyere ihe ndabere maka ikpebi arụmọrụ nke FIBC, ọ dị mkpa ịnwale dị ka o kwere mee na ngwaahịa nke onye ahịa ahụ chọrọ ibu. Nke a bụ "ọkọlọtọ dị maka ule" edere na ọkọlọtọ. Dịka o kwere mee, a ga-eji ụkpụrụ ọrụ aka iji merie nsogbu nke akụ na ụba ahịa. . N'ikwu okwu n'ozuzu, enweghi nsogbu na FIBC na-agafe ule na-ebuli elu.
Ngwa FIBC nwere ngwa dị iche iche, ọkachasị maka nkwakọ ngwaahịa simenti, ọka, ihe ọkụkụ kemịkalụ, nri, stachi, mineral na ntụ ntụ na ihe ndị ọzọ, na ọbụlagodi ngwongwo dị egwu dịka calcium carbide Ọ bụ nnọọ adaba n'ihi na loading, ebutu, njem na nchekwa. . Ngwa FIBC dị na mbido mmepe, ọkachasị otu-tan, pallet (otu pallet nwere otu FIBC, ma ọ bụ anọ) FIBC na-ewu ewu.
Nhazi nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ụlọ dị n'azụ mmepe nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Nhazi nke ụfọdụ ụkpụrụ ekwekọghị na mmepụta n'ezie, ọdịnaya ahụ ka dị na ọkwa nke ihe karịrị afọ iri gara aga. Dịka ọmụmaatụ, ngalaba ngalaba ụgbọ njem rụrụ ọkọlọtọ "FIBC", ngalaba ngalaba ihe eji arụ ụlọ wepụtara ọkọlọtọ "Cement Bag", ndị ngalaba akwa na-emepụta ọkọlọtọ "Geotextile", yana "akpa akpa" site na ngalaba plastik. N'ihi enweghị mkpa nke iji ngwaahịa na nlebara anya zuru oke banyere ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ, a ka nwere usoro adịghị n'otu, nke dị mma na nke ziri ezi.
Ojiji FIBC na mba m na-abawanye, mbupụ FIBC maka ebumnuche pụrụ iche dịka calcium carbide na mineral na-abawanye. Yabụ, ọchịchọ ahịa maka ngwaahịa FIBC nwere nnukwu ikike yana atụmanya mmepe sara mbara nke ukwuu.
Bopp laminated akpa, Pp ndepụta Bag, P kpara akpa, P ciment Block Bottom valvụ Bag, Gbochie Bottom Valve Bag, Gbochie Bottom Valve Cement Packaging Bag, Ngwa niile